Refund mutemo - Wevino.store
Isu tinovimbisa kugutsikana kwako nezvigadzirwa zvedu. Nekudaro, zvinoenderana neEU Online uye Yekutengesa Zvinodiwa, iwe une kodzero yekukanzura odha yako chero nguva mukati memazuva gumi nemana ekugamuchira zvinhu zvako. Nguva yekukanzura inopera pakupera kwemazuva gumi nemana ekushanda kutanga nezuva rakatevera zuva rawakatambira zvinhu.
Zvinonyanya kudzoreredza misimboti yepamhepo yedu chikuva:
1. Unogona kukanzura odha yako chero nguva usati wazadzwa uye uwane yakazara yekudzoserwa immidiatelly. Haufanire kutibata nesu kuti tidaro. Ingotinya "kanzura" kana rako reodha yekusimbisa peji kana pane yako account peji.
2. Unogona kukanzura odha yako chero nguva kunyangwe mushure mekuzadzwa mukati memazuva gumi nemana ekugamuchira zvinhu - Ingobaya pano. Nyora chikonzero chekudzoka, kunyangwe kana iwe usingachichide kana kuti usichichichichida wobva watora yako yekudzosa tsamba yekutumira pane yako email. Uchadzoserwa mumazuva gumi mushure mekunge tagamuchira chinhu chedu kumashure uye kuchidzorera.
3.Kuti udzore ndapota dzorera chigadzirwa chako chisina kuvhurwa muchimiro chayo chepakutanga uye chakachengetedzwa zvakachengetedzeka mukati memazuva gumi nemana ekugamuchira pasuru yako uye kudzoserwa kuzere kuchazobviswa kubvisa mari yekuendesa neyekutora. Kutumira uye kubata muripo hazvibhadharwe kunze kwekunge zvinhu zvaunzwa zvange zvisiri, kukuvara kana kukanganisa. (Izvi hazvikanganise kodzero dzako dzemutemo kana paitika zvinhu zvisina kumira zvakanaka).
tapota cherechedza - kana iwe ukasarudza kutumira chinhu iwe pachako uye kwete kuburikidza neyedu yekutakura sevhisi sevhisi tinokurudzira kushandisa zvakakodzera masevhisi kuvhara kukosha kwechigadzirwa chako kana paine chero kukuvara kwakaitika panguva yekudzoka maitiro.
Zvinhu zvisingadiwe zvinodzokera kwatiri zvakakanganisika zvisina kutakurwa tichishandisa yedu yakabvumidzwa yekambani yekutakura kana kudonhedza sevhisi hazvizodzoserwa.
Zvinoenderana neEU's 2000 Distance Kutengesa Mitemo, une mvumo yekukanzura odha yako mukati memazuva gumi nemana, kutanga kubva pazuva rakapihwa Zvinhu kwauri (kana nemumwe munhu waunoziva kwauri uyo akasaina zvinhu zvako kubva kumutakuri wedu) . Pakati peino nguva iwe unogona kudzosera Zvinhu kwatiri kuti tidzosere mari kuzere. Kudzoserwa kuzere kunozopihwa chero zvinhu zvikaonekwa nesu kunge zviri mumamiriro akafanana nezvavakaendeswa kwauri uye kuti chikumbiro chekukanzura chinogamuchirwa nekunyora. Chero Chete rakadzimwa rinodzoserwa mukati memazuva gumi ekugashirwa nesu kwezvinhu zvakadzoserwa. Kana Dzakadzorerwa Zvinhu hazvifungidzirwe nesu kunge zviri mumamiriro akafanana neakaunzwa kwauri, isu tinodzosera izvo Zvako kwauri uye mari yekudzosera-zvakarecha ichafanira uye inobhadharwa newe kwatiri.
Vatengi vanoshuva kudzima maOrita avo mushure mekuzvitakura vanofanira:
chengetedza zvine mutsindo zvinhu Zvakakodzera uye haufanire kuzvishandisa, kuvhura kana kuzvishandisa; uye dzosera Zvakakodzera Midziyo mukati memazuva gumi nemana kubva pazuva rekutakura, zadza neese akakodzera kurongedza uye mumamiriro akafanana seakaendeswa kwauri.